Guess the Logo: Multiple Choice Quiz 1.4.1 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.4.1 လြန္ခဲ့ေသာ4ရက္က
ဂိမ္းမ်ား ဥာဏ္စမ္း Guess the Logo: Multiple Choice Quiz
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
With Over +7,500,000 Installs, Guess the Logo is one of the biggest trivia games on Google Play! Install and join the FUN! ♥
✔ Multiple choice options for every logo
✔ Helpful clues! Hints are awarded to help you figure out the answer
✔ Ask your Facebook friends for help when stuck!
✔ That’s why Guess the Logo delivers timely updates, with new logo packs added continuously
သွင်းယူမှုများ +7.500.000 ကျော်နှင့်တကွ, Logo Google တွင်အကြီးမားဆုံး trivia ဂိမ်း Play တစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲ! အဆိုပါ FUN Install လုပ်ပြီး join! ♥
ဖြေရှင်းနိုင်မှ 1600 ကျော်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် & အမှတ်တံဆိပ်၏အကြီးဆုံးလိုဂိုစုဆောင်းခြင်းနှင့်အတူလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ထံမှလူကြိုက်များအမှတ်တံဆိပ်၏တန်ချိန်။
သငျသညျနေ့စဉျနေ့အမှတ်တံဆိပ်ကိုတွေ့မြင်ရဲ့သင်သည်မှန်းဆနိုင်ပါတယ်မည်မျှကြည့်ရှုကြကုန်အံ့။ ယခုလိုဂိုခန့်မှန်း Download နှင့်ပျော်စရာစတင်ပါစေ!
တိုင်းလိုဂိုများအတွက်✔အကွိမျမြားစှာရှေးခယျြမှု options များ
အရိပ်အမြွက် & သဲလွန်စ
✔သင့်ရဲ့အမှတ်တံဆိပ်ဂိမ်းပဟေဠိရမှတ်တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ရန်က Facebook သို့မဟုတ် Google Plus အားနှင့်အတူ Login!
သငျသညျမိတျဆှမြေားနှငျ့သငျ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်ရှိရာတစ်ဦးက Scoreboard ✔။
✔အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်အချိန်မီ updates များကိုကယ်တင်တတ်၏ဖြစ်မယ်ထင်ပါလဲအဘယ်ကြောင့်အသစ်ကလိုဂိုအထုပ်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဆက်ပြောသည်နှင့်အတူဒါကရဲ့
ရိုးရှင်းသော & စွဲလမ်းပျော်စရာသင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခု Install နှင့်ပျော်စရာစတင်ပါစေ!
ဒီဂိမ်းမှာပြထားတဲ့သို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုအားလုံးအမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်နှင့် / သို့မဟုတ်မိမိတို့၏သက်ဆိုင်ရာကော်ပိုရေးရှင်း၏အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။ အလွတ်သဘောအခြေအနေတွင်ဖော်ထုတ်ခြင်း၏အသုံးပြုမှုကိုအဘို့ဤအသေးအဖွဲ app ထဲမှာအနိမ့် resolution ကပုံရိပ်တွေ၏အသုံးပြုမှုကိုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအောက်တွင်မျှတသောအသုံးပြုမှုအဖြစ်ငျြးပွညျ့မီ။
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz အား အခ်က္ျပပါ
bluepandastore စတိုး 29 74.98k
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Guess the Logo: Multiple Choice Quiz အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Logos Box
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://games.taplane.com/privacy-policy/
App Name: Guess the Logo: Multiple Choice Quiz
Release date: 2019-07-12 06:27:54
လက်မှတ် SHA1: 17:21:39:5F:D4:81:CD:CF:DB:AB:BB:F1:2A:4A:66:1E:42:1B:2B:94
အဖွဲ့အစည်း (O): TapLane Inc.
နယ်မြေ (L): Windsor
Guess the Logo: Multiple Choice Quiz APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ